Maamulka Shabeellaha Hoose oo qaadaya howlgal ka dhan ah Al-Shabaab – The Voice of Northeastern Kenya
Maamulka Shabeellaha Hoose oo qaadaya howlgal ka dhan ah Al-Shabaab
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa wareysi gaar ah siiyay idaacadda Risaala ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qorsheeyeen in ay weerar ku qaadan degaanada ay ku sugan yihiin xubnaha Shabaab ee ku yaalla Shabeelaha Hoose.
Howlgalka ayuu hoosta ka xariiqay in lagu beegsanaayo Shabaabka ku sugan Magaalooyinka waa weyn ee Shabeellaha hoose si looga badbaado qaraxyo ay soo abaabulaan.
Waxaa uu sidoo kale xusay in Ciidanka dowladda ay xoojiyeen howlgallada ay ka waddaan Shabeellaha Hoose maalmihii lasoo dhaafay.
Dhanka kale diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Drones- ka ee Maraykanka ayaa lagu soo waramayaa inay shalay duqeyn la beegsadeen saldhig Al-shabaab ay ku leedahay Degmada Awdhiigle ee Gobolka Shabeellaha hoose.
War qoraal ah oo ka soo baxay Taliska Maraykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntan si gaar ah loola beegsaday goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Shabaab.
Waxaa qoraalka Taliska qeyb ka ah in weerarkaas lagu dilay afar ka mid ah xarakada Al-Shabaab
Maraykanka ayaa intaasi ku daray in weerarkaasi oo ay fuliyeen ciidamo iskaashanaya la qaaday kaddib markii xukuumada Washington iyo ciidamada saaxiibada ah ay la kulmeen weerar islamarkaana uu weerarka Awdhiigle ahaa is difaacid.
← Marwada koowaad ee dalka oo abaalmarin la guddoonsiiyay
Baarlamaanka oo dib u dhigay hindisa sharciyeed ku saabsan kordhinta gunnooyinka mudanayaasha →